Weeraro Kala Duwan Oo Lagu Dilay Askar American Ah. – Calamada.com
Weeraro Kala Duwan Oo Lagu Dilay Askar American Ah.
calamada September 15, 2018 1 min read
Weeraradan oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan Ciidamada Mareykanka ee duulaanka ku jooga dalka Afghanistan waxey ka kala dhaceen Waqooyga iyo Bartamaha dalkaasi.
Weerarka hore waxey ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ka fuliyeen xarunta Wilaayada Baglan ee Waqooyga Afghanistan waxeyna weerarkan la beegsadeen ciidamo isugu jira saliibiyiinta Mareykanka iyo kuwa Xukuumadda Ridada Kaabul.
Ciidamada Mujaahidiinta Ayaa weerarkan ku dilay Todobo askari oo saddex ka mid ah ay tahay Saliibiyiinta Mareykanka,iyadoona tiro intaasi ka badan lagu dhaawacay weerarkaasi.
Howlgalka Labaad waxey ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan ka fuliyeen deegaan ka tirsan Wilaayada Lowjar ee bartamaha dalka Afghanistan,iyadoona faahfaahin laga helayo weerarkaasi oo ah mid lala beegsaday Saliibiyiinta Mareykanka.
Warbaahinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa baahiyay in weerarkan lagu dilay Labo Askari oo Saliibiyiinta Mareykanka ah laguna dhaawacay saddex kale oo isla Saliibiyiinta ah kuwaasi oo la xaqiijiyay iney dhaawacyadooda culusyihiin.
Weeraradan oo qeyb ka ah howlgal dagaaleedka Al-khandaq ee ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ay ka wadaan guud ahaan Wilaayaatka dalkaasi ayaa kusoo aadaya xilli dhiig bax xoogan uu ku socda Saliibiyiinta duulaanka ku joogta dalkaasi.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 05-01-1440 Hijri.
Next: Qaraxyo Ka Dhacay Duleedka Magaalada Kismaayo.